Su'aal: Biyaha oo iska yimaado madhalaysnimo ma keentaa?
Author Topic: Su'aal: Biyaha oo iska yimaado madhalaysnimo ma keentaa? (Read 2665 times)
« on: June 02, 2015, 01:08:26 PM »
thanks alxdulidlaah wllo adbaa u mahdsatihiin khayr badan all haydin siiyo dhamaan dhqaatiirta ku hawlan u adeegida dadkooda wllo wan aqristy qoraalo ku saabsan biyaha oo iska imaada ama prostate glnaka oo caabuq ku yimaado markaa hadiii aanan awoodin inaan dhaqtr tago samaayn caafimmmad maygu yeelan kartaaa se hadhaw ma dhalays ma ku noqon karaaaa
Re: Su'aal: Biyaha oo iska yimaado madhalaysnimo ma keentaa?
« Reply #1 on: June 05, 2015, 07:30:59 PM »
Haddii aad ka wadid biyaha iga imaanayo ma dhic kartaa inay yaraadaan ama joogsadaan oo sidaa madhalaysnimo ku imaato? jawaabtu waa maya, laakiin haddii ay jirto cillada keenayso in ay shahwada iska timaado way dhici kartaa in cilladaas ay dhaawac gaarsiiso unugyada shahwada soo saaro sidaasne saameyn u gaarsiiso madhalaysnimada.
Views: 13274 August 08, 2011, 07:55:39 PM
Views: 9906 November 21, 2011, 10:09:15 PM
Views: 4172 October 16, 2015, 11:59:11 AM
Views: 29135 December 18, 2015, 08:07:37 PM
Views: 11102 January 09, 2016, 03:57:35 PM